Yako Pamusoro Pedu Peji Inoteedzera Aya Akanaka Maitiro? | Martech Zone
An Nezvedu peji nderimwe remapeji akatsanangurwa mu yega yega webhusaiti yekutarisa. Iyo peji rinonyanya kukosha pane kuti makambani aripe chikwereti kwariri. Yakakura Nezvedu peji rinowanzoonekwa nevangangoita vashandi nevatengi kuti vadzidze zvakawanda nezve vanhu vari kumashure kwekambani. Isu tinowanzo kanganwa kuti hazvisi chete maficha uye mabhenefiti ayo tarisiro inotevera - ivo vanoda kunzwa vane chivimbo chekuti vari kuzoshanda nevanhu vavanovimba uye havazombozvidemba!
Kuvimba uye kuremekedza zvinhu zvinofanirwa kuwanikwa. Kuziva kunouya kubva pakuva pamusoro pendangariro. Izvi zvese zvinofanirwa kuve zvinangwa zvekupedzisira zveyako nzira yekutengesa, kubva kuSEO uye kushambadzira zvemukati kune vezvenhau uye email. Yako yekambani Nezvedu peji mumwe mukana wekutaura nyaya iyo ichakubatsira iwe kunamatira mupfungwa dzemutengi wako. (Uye se Bhuruu Acorn's kudzidza kunoratidza, zvakare mukana wekutengesa.) Vincent Nero, Senior Content Marketing Specialist
Kutyisidzirwa Media yakaongorora zvaive zvakafanana neakakwira-kuita Nezvedu mapeji uye akaisa pamwechete epic chinyorwa chakaratidza 50 Kufuridzira Nezvedu Peji Mienzaniso. Vakagadzira iyi yakanaka infographic inoratidza gumi nembiri tsika dzekuteedzera paunenge uchizvigadzirira yako.
kukosha pfungwa - isa chinzvimbo chako chekukosha pamusoro peta apo vashandisi vanoshandisa 80% yenguva yavo.
Benefits - vatengi vanosarudza kuverenga nezve zvakanaka zvinobatsira kwete zvakaipa.
Mutsa Manzwiro - yako tarisiro ichave iri mbiri kana katatu mukana wekuita nenyaya yemanzwiro kuvakanganisa.
Video - ruzhinji rwevagadziri vanosarudza kuona vhidhiyo pane kuverenga zvinyorwa papeji.
dangamusha - sanganisira mufananidzo unozivikanwa wemuvambi wekambani yako, ichawedzera shanduko 35%!
Photos - vatengi vanopedza 10% yakawanda nguva vachitarisa mafoto pane kuverenga zvinyorwa pane peji. Splurge yeimwe nyanzvi pfuti!
Kwete Stock Stock - stock mapikicha haangori blah… ivo chaiko kiyi yekusavimba kambani.
Testimonials - vatengi zvipupuriro zvinowedzera kutengesa ne34%!
Ongororo Dzakanaka - 72% yevanhu vanoti wongororo dzakanaka dzinovaita kuti vavimbe nebhizinesi remuno zvakanyanya.
Dana kuAte - chii chaunoda kuti mushanyi aite mushure mekunge vaongorora peji rako? Shanduko nhatu nekuwedzera CTA!
Contact Info - 51% yevanhu vanofunga zvakakwana ruzivo rwekubatana ndicho chakanyanya kukosha chinhu chisipo kubva kumawebhusaiti. (Tinoda kuiisa mutsoka pane peji rega rega!)
Heano infographic, Iyo Sayenzi Inodzosera Kwakakura Nezvedu Mapeji.
Tags: pamusoronezvedupamusoro pedu maitiro akanakanezve isu peji zvinhunezvedu mapejizvakanakisisa zviitoSiege MediaIyo Sayenzi Inodzosera Kwakakura Nezvedu MapejiVincent Nero
Iyo Social Media Kushambadzira Chirongwa mune 6 Nyore Matanho